Bahlaba eyohlu lwamagama abe-ANC | Isolezwe
Bahlaba eyohlu lwamagama abe-ANC
Isolezwe / 15 November 2012, 12:39pm /
AMALUNGU e-ANC asemnkatshubomvu aseka uMengameli Jacob Zuma ukuthi athathe ihlandla lesibili ebuholini bale nhlangano aphinde abe nguMengameli wezwe ashaya amakhala ngokukhishwa kohlu lwabantu okufanele babe ngamalungu esigungu esiphezulu se-ANC uma kukhethwa ubuholi bukazwelonke baleli qembu eMangaung ngoDisemba.
Abaholi abangayizwa kahle le nto batshele iphephandaba elinguza-kwabo waleli i-The Star ukuthi bona babona kuyinto enhle ukuthi kuqedwe ukusetshenziswa ko “chatho” okubulala le nhlangano ngoba abakade beseka ohlulwe okhethweni bagcina besale ngaphandle.
Amalungu amathathu e-ANC leli phephandaba elikhulume nawo athe lolu daba lwadingidwa kakhulu emhlanganweni oyinguyazana owawuseGoli naseThekwini.
Bathe bayaluchitha “uchatho” ngoba luhlukanisa phakathi uKhongolose luwenze ube buthakathaka nokuyinto eyabonakala kahle okhethweni olwahlula owayenguMengameli we-ANC, uMnuz Thabo Mbeki, ePolokwane ngo-2007.
Abaholi bezifundazwe abaningi okukhulunywe nabo baveze ukuthi lolu daba bebengakaziswa ngalo bathi kodwa nabo balweseka kakhulu uma lugcina lube yimpumelelo.
UNobhala we-ANC eNorthern Cape, uMnuz Saul Zamani, nomlingani wakhe wase-Northern Cape, uMnuz William Bulwane, bakwamukele ngezandla zombili ukuthi kuqedwe uchatho.
Ukuhlongozwa kokumiswa kochatho akuqali manje njengoba nePhini likaMengameli, uMnuz Kgalema Motlanthe, ngesikhathi ekhuluma engqungqutheleni yesifundazwe eLimpopo wakhombisa ukungaku-nambithisisi ukusetshenziswa kochatho.
Elinye ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC lithe bafuna ukuqeda lolu luhla lwamagama abantu ngoba ludala uqhekeko eqenjini futhi lugcina ligudluze nabantu okufanele ngabe babanjelwa eduze ngenxa yobuhlakani babo.
UZamani uthe kumanje basazikhotha amanxeba ngendlela izinto ezenzeka ngayo ePolokwane ngesikhathi kukhethwa uZuma okwaphetha ngokuthi ababeseka uMbeki owehlulwa wukhetho basala ngaphandle bedonsa kanzima futhi ikusasa labo lifiphele kwezombusazwe.
Okhulumela i-ANC kuzwelonke, uMnuz Keith Khoza, uthe abantu abafuna kuphele uchatho kumele bakhulume namagatsha eqembu.